No site by that name on this system. ဒီစနစ်ေပါ်တွင် ထိုနာမည်ြဖင့် ဆိုဒ်မရှိပါ။	 Details
2012-02-03 20:57:41 GMT
Database tables are missing. ေဒတာေဗ့ဇယားများ ေပျာက်ေနသည်။	 Details
Multisite only works without the port number in the URL. အများသံုးဆိုဒ်သည် URL တွင် port နံပါတ် မပါမှသာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။	 Details
If you&#8217;re still stuck with this message, then check that your database contains the following tables: ဒီသတင်းပို့ချက်ကိုသာ ဆက်လက်ရရှိေနလျှင် သင့်ေဒတာေဗ့တွင် ေအာက်ပါ ဇယားများ ပါဝင်သလား စစ်ေဆးြကည့်ပါ။ :	 Details
Read the <a target="_blank" href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">bug report</a> page. Some of the guidelines there may help you figure out what went wrong. <a target="_blank" href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">ကုဒ်မှားယွင်းမှု သတင်းပို့ချက်</a> စာမျက်နှာကို ဖတ်ပါ။ ထိုေနရာတွင်ရှိေသာ အချို့လမ်းညွှန်ချက်များသည် ဘယ်ေနရာမှားေနသလဲ ရှာေဖွနိုင်ရန် သင့်ကို အကူအညီြဖစ်ပါလိမ့်မည်။	 Details
What do I do now? အခု ကွ​ျန်ေတာ် ဘာ​လုပ်​ရ​မှာ​လဲ ?	 Details
2012-03-19 20:22:42 GMT
<strong>Database tables are missing.</strong> This means that MySQL is not running, WordPress was not installed properly, or someone deleted <code>%s</code>. You really should look at your database now. <strong>ေဒတာေဗ့ ဇယားများေပျာက်ေနသည်။</strong> ဒါက MySQL အလုပ်လုပ်မေနဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ WordPress ကို မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းမထားြခင်း သို့မဟုတ် တစ်စံုတစ်ေယာက်မှ <code>%s</code> ကိုဖျက်လိုက်ြခင်း ြဖစ်မည်။ တကယ်ကို သင့် ေဒတာေဗ့ကို စစ်ြကည့်ဖို့ လိုအပ်ေနပါသည်။	 Details
If your site does not display, please contact the owner of this network. သင့်ဆိုဒ် မေပါ်လျှင် ဒီကွန်ယက် ပိုင်ရှင်သို့ ဆက်သွယ်ပါ။	 Details
Error establishing database connection ေဒတာေဗ့ ဆက်သွယ်မှု တည်ေထာင်စဉ် အမှားအယွင်းရှိသည်။	 Details
No site defined on this host. If you are the owner of this site, please check <a href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">DebuggingaWordPress Network</a> for help. ဒီဝန်ေဆာင်မှု လက်ခံေဆာင်ရွက်သူထံတွင် မည်သည့်ဆိုဒ်မျှ သတ်မှတ်မထားပါ။ သင် ဒီကွန်ယက်ပိုင်ရှင်ဆိုလျှင် အကူအညီရရန် <a href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">WordPress ကွန်ယက် အမှားရှာေဖွြခင်း</a> တွင် စစ်ေဆးြကည့်ပါ။	 Details
That site does not exist. Please try <a href="%s">%s</a>. ဒီဆိုဒ် မရှိေသးပါ။ <a href="%s">%s</a> ကို ြကိုးစားြကည့်ပါ။	 Details
2012-02-03 20:57:42 GMT
<p><em>The site you were looking for, <strong>%s</strong>, does not exist.</em></p> <p><em>သင်ရှာေဖွေနေသာ <strong>%s</strong> ဆိုဒ် မရှိေသးပါ။</em></p>	 Details